दुधमा चिनी मिसाएर नखानुस / यस्ता छन् कारण – Kalika News
दुधमा चिनी मिसाएर नखानुस / यस्ता छन् कारण
२० मंसिर २०७६, शुक्रबार ११:४६ , मा प्रकाशीत
दुध आफैमा पनि पौष्टिकताले भरिएको चीज हो । दुधजन्य परिकार , बिहानको चिया र धार्मिक कार्यको लागि पनि दुधको महत्वपुर्ण भुमिका रहँदै आएको छ । केहि अध्ययनबाट थाहा भएको छ कि, दुध सेवनले क्यान्सरको संभावना पनि कम हुन्छ । दुधमा क्याल्सियम, भिटामिन डि र संयुग्मित लिनोलिक एसिडको मात्रा उच्च हुन्छ ।
दुध सेवन गर्दा कोलोरेक्टल, स्तन र पेटको क्यान्सरको जोखिम कम हुने गरेको चिकित्सकहरु बताउँने गर्छन् । दुध हरेकरुपमा प्रयोगको लागि सही मानिन्छ तर दुध पनि मिलाएर सेवन गर्न नजाने यसका धेरै बेफाईदाहरु हुने गर्छन् ।
प्राय हामी स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ भन्दै दुधलाई बेसारसँग, महसँग मिश्रण गरेर पिउने गछौ जसन स्वास्थ्यको लागि खास फाइदाजनक छ तर हामीले दुधलाई अझै मिठो बनाउँने बाहनामा दुधमा चिनीमिसाएर खाने गछौ जुन स्वास्थ्यको लागि नितान्त अस्वाथ्यजनक हुने गर्छ ।
तपाई हामी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ तर यो यर्थाथ हो । दुधमा चिनी मिसाएर सेवन गर्दा त्यसले शरीरमा जलन र अक्सिडेटिभ स्ट्रेसको समस्या हुन्छ । साथै यसको कारण कोशिकालाई नोक्सान पनि पुर्याउँछ ।
त्यसैले दुध सेवन गर्नुहुन्छ भने, चिनीको मिश्रण पटक्कै नगरौ । साथै ख्याल गर्नुहोस दुध र दुधजन्य उत्पादनको अधिक सेवनले हाम्रो शरिरमा अम्ल बढाउँछ । जुन स्वाथ्यको लागि राम्रो पनि होईन ।
दिमागको क्षमता कसरी बढाउँने ? जान्नुहोस आठ तरिका
पत्याउनु हुन्छ ? चौध किलोको भाले !
दिउँसो सुत्ने बानी छ ? बेलैमा ख्याल गर्नुस..